Mashandisiro eApple Watch tochi | Ndinobva mac
Mashandisiro aungaita Apple Watch tochi
Chinhu chekutanga uye tisati tatanga, Waizviziva here kuti Apple Watch yaive netochi? Zvakanaka, kana iwe uri mumwe weavo vaisaziva, gara nesu uye iwe uchaona iri rakakura basa reApple's smart watch. Iri basa rave riripo kwenguva yakareba asi kana iwe uri mushandisi mutsva wewachi iwe ungasazive kuti iriko, mune ino nhasi tichakuratidza maitiro ekuishandisa.
Iri basa rave kuwanikwa kubvira iyo watchOS 4 inoshanda system vhezheni kubva kuApplewatchwatch, saka hachisi chinhu chitsva. Munguva dzedambudziko zvinogona kubatsira kuve netochi shoma pane yako ruoko uye izvi ndizvo chaizvo zvinobvumidzwa nebasa iri.
Maitiro ekumisikidza tochi yeApple Watch
Zvine musoro, tochi yeApple Watch ndiyo skrini yewachi pachayo uye nekudaro inofanirwa kutariswa kuti ichapisa kunyanya pachiratidziri kana tichigara nayo kwenguva yakareba, neizvi tinoreva kuti inofanira kunge iri inoshandiswa sechimbichimbi.kana nenguva, uye kwete kwemaawa mazhinji.
Kushandisa tochi kuvhenekera kumba kunyangwe imba yekugezera husiku pasina anovhiringidza chero munhu, kukiya mugaraji panodzima mwenje kana kupota uchiita kuti vamwe vatione patinomhanya anogona kuva mamwe emabasa anonakidza eti tochi. wachi.
Kuti tibatidze tochi tinofanirwa kubata nekubata pasi pechidzitiro nekutsvedza kusvika open control center uye tinya pane iyo flashlight icon
Isu tinotsvedza kubva kuruboshwe kurudyi kusarudza modhi: mwenje wakadzikama wakachena, mwenje muchena unopenya, kana mwenje mutsvuku wakadzikama
Kana tangopedza tinogona kudzima tochi nekudzvanya iyo Dhijitari Korona kana bhatani rerutivi. Tinogona zvakare kutsvedza pasi kubva pamusoro pevhavha kana kuisa ruoko rwedu pachiratidziri ndiyo yandinoshandisa pachangu
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mashandisiro aungaita Apple Watch tochi
Tora mwedzi mitanhatu yemahara paApple TV + kana iwe uine PlayStation 6
XLoader malware yakazviita kumaMacs